RP 2 Yr ikhophi ukusebenza | Data Recovery
RP 2 Yr ikhophi ukusebenza
Home → RP 2 Yr ikhophi ukusebenza
Leli khasi kuzokwenza bona ulimi kusiphequluli sakho 12 izilimi isibonisi ngalolo limi abafanele.
Uma ngolimi lwakho kungakhonjisiwe, chofozani lapha ukubona i ikhasi IsiZulu angahunyushelwa isiphequluli sakho.
2. Sicela ukhethe enye yezinkinobho ngezansi isigqebhezana oyikhethile oluhambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Sicela ubuyekeze LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ukuze uthole imiyalo yakho ekutholeni i ikhodi kusebenze usebenzisa RPRID inombolo yakho ye-serial.2. Inkinobho engezansi isigqebhezana ekhethiwe、Sicela ukhethe ngokusho isistimu yakho yokusebenza。3. Sebenzisa RPRID nenombolo ye-serial、Sicela uthole ikhodi kusebenze。Kanjani ukuze uthole LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela Sicela uhlole。
2. Sicela ukhethe inkinobho yohlelo olusebenzisayo. Le nkinobho itholakala ngezansi ukuthengwa akhethiwe.3. Ukuze ufunde indlela ukuthola ikhodi yakho kusebenze nge inombolo yakho ye-serial RPRID, ukuvakasha LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela2. Khetha okukodwa isigqebhezana ekhethiwe itholakala ngaphansi izinkinobho ukukhetha uhlelo lakho lokusebenza.3. Lea ngesikhathi LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ukuze uthole imiyalo ukuthola ikhodi yokusebenzisa ngu nenombolo ye-serial RPRID yayo.2. Sicela ukhethe enye yezinkinobho ngezansi amakhuphoni akho akhethiwe, the entsprichtt isistimu yakho yokusebenza.3. Sicela ufunde LC Tech imiyalelo inqubo ukusebenza bese ulandela imiyalelo, ikhodi yokusebenzisa usebenzisa RPRIDzu yakho wathola nenombolo ye-serial.2. Yenza okukhethayo kusuka、Inkinobho ngezansi isigqebhezana isistimu yakho yokusebenza elihambisana ekhethiwe。3. Lapho usebenzisa i-inombolo yakho ye-serial ukuthola RPRID ikhodi kusebenze，Sicela ubone ezihlobene imisebenzi yakhoLC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela。 2. Khetha eyodwa yezinkinobho ngezansi ukuze ukhethe amakhuphoni kuncike ohlelweni lokusebenza oyisebenzisayo.3. Mayelana kanjani ukuthola ikhodi yokusebenzisa usebenzisa inombolo yakho ye-serial RPRID
LC Tech Ukuqalisa Process UmhlahlandlelaSicela ubheke. 2. Chofoza eyodwa yezinkinobho ngezansi isigqebhezana oyikhethile, olufana uhlelo lakho lokusebenza.3. sicela ubheke LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ngoba iziyalezo zendlela ukuthola ikhodi yokusebenzisa ne nenombolo ye-serial RPRID.2. Phakathi izinkinobho evelayo ngaphansi isigqebhezana yakho ekhethiwe, Khetha inkinobho oluhambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Bheka LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela Ukuze ubone imiyalelo ye-ikhodi kusebenze Through inombolo yakho ye-serial RPRID.2. sicela, ngaphansi akhethiwe isigqebhezana chofoza, afanele isistimu yakho yokusebenza.3. sicela, sicela ufunde LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ngoba iziyalezo zendlela ukuthola ikhodi yokusebenzisa usebenzisa nenombolo ye-serial RPRID.
2. Sicela ukhethe enye yezinkinobho ngezansi ivawusha akhethiwe ukuthi kukhona iyahambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Sicela uhlole LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela Ukuze uthole imiyalelo mayelana kokuthola kusebenze usebenzisa inombolo yakho ye-serial ukuthi iqala ikhodi isifinyezo RPRID.2. Sicela, khetha eyodwa yezinkinobho ngezansi ukuze isigqebhezana yakho ekhethiwe oluhambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Sicela ubuyekeze LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ukuze uthole imiyalo yakhe kanjani ukuthola ikhodi yokusebenzisa usebenzisa inombolo yakho ye-serial RPRID.2. inkinobho yakho isigqebhezana ekhethiwe ngezansi ukuze ukhethe eyodwa oluhambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Buyekeza LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela imiyalelo yakho ukuthola ikhodi yokusebenzisa usebenzisa inombolo yakho RPRID serial.
2. Sicela ukhethe enye yezinkinobho ngezansi isigqebhezana oyikhethile oluhambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Sicela ubuyekeze LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ukuze uthole imiyalo yakho ekutholeni i ikhodi kusebenze usebenzisa RPSSD inombolo yakho ye-serial.RescuePRO® Deluxe for SSD
Uhlelosimo Macintosh Software
Sicela ufake isofthiwe kukhompyutha, futhi uma ugijima it okokuqala, you will then be prompted to activate your software. Uyobe unikezwe isixhumanisi ekhasini kusebenze. Sicela ulandele isixhumanisi futhi ugcwalise ifomu, qiniseka ukuthi ufaka inombolo yakho ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye-software RescuePRO®. Chofoza lapha ukuze uthole yesinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela ukusebenza
Uma ikhompyutha ukuthi kokufaka ku ayixhunyiwe ku-inthanethi, you may email your activation request number to RescuePRO® Support, futhi sikwazi ukukunika i Code Ukuqalisa.
Ukuze uthintane nathi, sicela ukhethe uhlelo lakho lokusebenza kusuka izinkinobho ngezansi futhi uqhubekele ifomu Contact Us yohlelo olusebenzisayo. nomake, sicela ushayele nathi (US) yamahhala (866) 603-2195, noma endaweni (727) 449-0891. Ukuze Europe ucingo +44 (0)115 704 3306
Faka isofthiwe kwikhompyutha yakho、Phakathi ukusetshenziswa wokuqala utshelwa icushiwe、A isixhumanisi ekhasini ukusebenza ibonakala。Sicela ufake ulwazi olufanele ngesimo ngokuhambisana okuqukethwe isixhumanisi。Ngaleso sikhathi、Sicela ufake isofthiwe RescuePRO® ikhodi serial。
Imininingwane indlela yokufaka(isiZulu)Sicela uchofoze lapha。
Uma ikhompyutha lapho ufuna ukufaka isofthiwe exhunywe kwi-Inthanethi、Sicela ubheke ngesicelo yokusebenzisa RescuePRO® ukwesekwa nge e-mail。Sinikeza eceleni ikhodi yokusebenzisa。
Sicela ufake isofthiwe kukhompyutha. Uma isiqalo lokuqala, uzocelwa ukuthi ukwenza kusebenze i-software yakho. Uzokwazi ukufinyelela ku-isixhumanisi kukusa ekhasini kusebenze. Sicela uchofoze isixhumanisi bese ugcwalisa ifomu, qiniseka ucacise inombolo yakho ye-serial ukuthola inguqulo yakho yamahhala ye-software RescuePRO®.
Chofoza lapha ukuze uthole isinyathelo ukusebenza by step Umhlahlandlela.
Uma ikhompyutha lapho ufaka ayinakho ukufinyelela Inthanethi, kungenzeka ukuthumela isicelo inombolo yokusebenzisa ukuze RescuePRO® Ukusekela ukuthola ikhodi yokusebenzisa.
Ukuze uthintane nathi, sicela ukhethe ngezansi inkinobho elihambisana isistimu yakho yokusebenza futhi ugcwalise ifomu contact, noma sishayele ku (866) 603-2195 (toll-US) noma (727) 449-0891. Ukuze-Europe, sicela uxhumane +44 (0)115 704 3306.
Faka isofthiwe kwi computer futhi, Uma usebenzisa okokuqala, uzokwaziswa ukwenza kusebenze. ukwenza lokhu, uzothola isixhumanisi ezokwenza qondisa you kuze the page kusebenze. Faka isixhumanisi bese ugcwalise ifomu. Qiniseka ukuthi ufake inombolo yakho ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye-software RescuePRO®.
Chofoza lapha ukuze uthole umhlahlandlela izinyathelo ezidingekayo ukuze kusebenze.
Uma ikhompyutha olufakayo ayixhunyiwe ku-intanethi, Ungathumela isicelo sakho kusebenze inombolo nge-imeyili ukusekela RescuePRO® futhi sizokuthumelela i-Code Ukuqalisa.
ukuxhumana nathi, ukhetha uhlelo lakho lokusebenza kusuka izinkinobho ezilandelayo futhi ugcwalise ifomu lokuxhumana kusistimu yakho yokusebenza. Ungase futhi shaya mahhala (OF. Uu.) al (866) 603-2195 noma endaweni ngesikhathi (727) 449-0891. Amakholi e-Europe, uphawu +44 (0)115 704 3306
Sicela ufake isofthiwe kwikhompyutha yakho. Uma uqala-ke okokuqala, Uzocelwa, Ukuze wenze i-software yakho. Uzobe usuthola isixhumanisi ekhasini kusebenze. Sicela ulandele le isixhumanisi bese ugcwalisa ifomu. Qiniseka ukuthi ufake inombolo yakho ye-serial, ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye RescuePRO®Software.
Chofoza lapha ukuze uthole yesinyathelo ngesinyathelo guide ukwenza kusebenze.
Uma ikhompyutha yakho ayixhunyiwe ukufaka isofthiwe on the Internet, Ungathumela kusebenze inombolo yakho isicelo nge e-mail ku-ukusekelwa RescuePRO®, ukuze sikwazi ukukunikeza ikhodi yokusebenzisa etholakalayo.
Ukuze uthintane nathi, sicela ukhethe enye yezinkinobho ngezansi ngokuvumelana isistimu yakho yokusebenza futhi uqhubeka contact abafanele. nomake, sishayele (US) yamahhala (866) 603-2195 ngaphansi noma esizeni (727) 449-0891 i. Izingcingo ezivela Europe +44 (0) 115 704 3306
Sicela ufake isofthiwe kwikhompyutha yakho，Lapho uqala ukusebenzisa isofthiwe，Thola ngokushesha，Ivumela ukuthi kusebenze i-software yakho。Khona-ke，Uzothola isixhumanisi，Lokhu isixhumanisi angafinyelela ikhasi kusebenze。Sicela uchofoze ekhasini isixhumanisi，Gcwalisa ifomu，Qinisekisa ukuthi izinombolo zakho serial，Ukuze kusebenze inguqulo yakho mahhala isofthiwe RescuePRO®。 Chofoza lapha，Buka ukusebenza isinyathelo Umhlahlandlela.
Uma ikhompyutha ufaka isofthiwe ngaphandle Inthanethi，Ungathumela e-mail ukuze RescuePRO® kusekelwa isicelo ikhodi kusebenze，Asikwazi ukukunikeza ikhodi yokusebenzisa。
Ukuze uthole uxhumene nathi，Sicela ukhethe uhlelo lakho lokusebenza kusuka izinkinobho ezilandelayo，Bese ufaka uhlelo lakho lokusebenza efanelekayo uxhumane nathi yakha，Thina Ungafonela (US) yamahhala(866) 603-2195，Noma lendawo locingo(727) 449-0891，Europe +44 (0)115 704 3306
Uma ufaka i-software kukhompyutha yakho, ekusebenziseni kokuqala, Uzokwaziswa ukwenza kusebenze i-software yakho. Bese kuba isixhumanisi ekhasini kusebenze. Sicela ugcwalise ifomu ngokulandela isixhumanisi. Sicela ugcwalise inombolo yakho ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye-software RescuePRO®
Chofoza lapha ukuze ulandele imiyalo yesinyathelo ngasinye isebenze.
Uma ikhompyutha ozifakile ayixhunyiwe ku-inthanethi, I RescuePRO® Ukusekela Ungacela ikhodi yokusebenzisa ngesicelo e-mail. Kuleso simo, ungase unikeze ikhodi yakho kusebenze kuwe
Ukuze Ukubonisana Sicela ukhethe uhlelo lokusebenza yakho kusuka inkinobho engezansi. Sicela ugcwalise ifomu Contact Us ukuze isistimu yakho yokusebenza. kungenjalo, Mahhala Call Inombolo (USA)(866) 603-2195 Noma ikhodi yendawo (727) 449-0891Sicela uzizwe ukhululekile ukubiza. inombolo European +44 (0) 115 704 3306 I.
Faka isofthiwe kwikhompyutha yakho, futhi uma ugijima okokuqala, uzokwaziswa ukwenza kusebenze isofthiwe. Uzoba ihlinzekwe isixhumanisi ekhasini kusebenze. Landela isixhumanisi futhi ugcwalise ifomu, ekuqinisekiseni ukuthi ufake inombolo ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye-software RescuePRO®.
Chofoza lapha ukuze uthole umhlahlandlela yesinyathelo ngesinyathelongoba ukusebenza.
Uma ikhompyutha lapho ufaka isofthiwe exhunywe kwi-Inthanethi, ungathumela inombolo yakho ye RescuePRO® isicelo sokuxhaswa kusebenze, futhi sizobe ikhodi yokusebenzisa akunike.
ukuthintana, ukhetha uhlelo lakho lokusebenza ngokuchofoza inkinobho ngezansi bese ugcwalisa ifomu Xhumana nathi yohlelo olusebenzisayo. noma, okukanye, telefonaci (US) inombolo oluhlaza (866) 603-2195, endaweni (727) 449-0891. Ukuze Europe ukubiza +44 (0) 115 704 3306
Faka isofthiwe kwikhompyutha yakho, Futhi session zayo zokuqala, Utshelwa ukwenza kusebenze isofthiwe. Khona-ke, Uzothola isixhumanisi kuya elisebenzisekayo. Finyelela isixhumanisi bese ugcwalisa ifomu. Qiniseka ukuthi uqaphele inombolo ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye-software RescuePRO®. Chofoza lapha ukuze uthole Ukusebenza izigaba Umhlahlandlela.
Uma ikhompyutha ufaka isofthiwe exhunywe kwi-Inthanethi, Ungathumela e-mail”Ukuze inani umsebenzi wakho ukwesekwa isicelo RescuePRO®, Futhi thina izokunikeza ikhodi yokusebenzisa.
Ukuze uthintane nathi, Khetha uhlelo lakho lokusebenza phakathi izinkinobho ezilandelayo futhi Qhubekisa ngokuthwebula Contact Us (Contact Us) Olufanele isistimu yakho yokusebenza. noma, sishayele (US”Ngo) inombolo yamahhala(866) 603-2195, Noma ucingo wendawo(727) 449-0891. ingxoxo-European, Shayela +44 (0)115 704 3306
sicela, ukufaka isofthiwe kwikhompyutha yakho futhi, Uma uyisebenzise okokuqala, uzokwaziswa ukwenza kusebenze isofthiwe. Uzobe usuthola isixhumanisi ekhasini kusebenze. sicela, uchofoze isixhumanisi bese ugcwalisa ifomu, Faka inombolo ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yamahhala uhlelo RescuePRO®. Chofoza lapha ukuze uthole ukuhamba, inqubo ukusebenza.
Uma ikhompyutha yakho, lapho ufaka uhlelo, hhayi exhunywe kwi-Inthanethi, ungathumela i e-mail nenombolo isicelo kusebenze ekusekeleni RescuePRO®, futhi sizokuthumelela i-ucela ikhodi kusebenze
Ukuze uthintane nathi, ukhetha, sicela, uhlelo lokusebenza yayo ngokucindezela inkinobho efanele ngezansi bese uya indlela yokwelapha ukusekela yohlelo olusebenzisayo. Ungashayela us (yamahhala ngaphakathi US) (866) 603-2195, noma isandiso sendawo (727) 449-0891. Ukusekela eziningi amaklayenti European +44 (0)115 704 3306
Sicela ufake isofthiwe kwikhompyutha yakho, futhi uma ugijima okokuqala, uzocelwa ukuba kusebenze uhlelo. Ngemva kwalokho uzonikwa isixhumanisi kusebenze ikhasi. Sicela ulandele isixhumanisi futhi ugcwalise ifomu, futhi uqinisekise ukuthi ufaka inombolo yakho ye-serial ukwenza kusebenze inguqulo khulula zohlelo RescuePRO®. Chofoza lapha ukuze uthole uhlelo uzoshiya kusebenze Umhlahlandlela
Uma idivayisi usifake exhunywe kwi-Inthanethi akuyona, ungathumela inombolo isicelo kusebenze yakho ukuze ngosekelo RescuePRO®, sikunika ikhodi kusebenze.
Ukuze uthintane nathi, sicela ukhethe uhlelo lakho lokusebenza kusuka izinkinobho ngezansi, bese ulandela-up model “Contact Us” Ukuze uhlelo lakho lokusebenza. Noma Kungenjalo, ungaxhumana nathi ku-inombolo yamahhala e-United States(866) 603-2195 Noma ucingo wendawo.(727) 449-0891
Ukuze uxhume baseYurophu: +44 (0)115 704 3306
Faka isofthiwe kwikhompyutha yakho bese uyisebenzise okokuqala, Kuzobe sekuba sizothunyelwa kusebenze software yakho. Uyobe unikezwe isixhumanisi ekhasini kusebenze. Landela isixhumanisi bese ugcwalisa formuário, ekuqinisekiseni ukufaka inombolo yakho ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye-software RescuePRO®.
Chofoza lapha ukuze uthole yesinyathelo ngesinyathelo guide for ukusebenza.
Uma ikhompyutha yilapho enza ukufakwa ayixhunyiwe ku-inthanethi, Ungathumela kusebenze inombolo yakho isicelo RescuePRO® Ukusekela angakunika i Code Ukuqalisa
Ukuze uthintane nathi, ukhetha uhlelo lwakho op kusuka izinkinobho ngezansi futhi uqhubekele ifomu Imininingwane yohlelo olusebenzisayo. noma, okukanye, usifonele (USA), yenombolo khulula (866) 603-2195 noma endaweni (727) 449-0891. Ukuze Europe ucingo +44 (0)115 704 3306
Faka isofthiwe kwi computer, Futhi uma ugijima it okokuqala, Uzokwaziswa ukwenza kusebenze i-software yakho. Khona-ke uzonikezwa isixhumanisi ekhasini kusebenze. Landela isixhumanisi bese ugcwalisa ifomu, RescuePRO® ikhophi yakho yamahhala ye-software, qiniseka ukuthi ufaka inombolo yakho ye-serial ukwenza kusebenze. Chofoza ukuze yesinyathelo ngesinyathelo guide for ukusebenza kwi.
Ingabe efakwe kwi computer ayixhunyiwe ku-inthanethi, Ngakho ungakwazi inani le-imeyili isicelo sakho yokusebenzisa ukuze RescuePRO® ukweseka, Futhi singakwazi ukufuna ukuvunyelwa ukukunikeza i ikhodi kusebenze.
Nathi ukuxhumana, Sicela ukhethe uhlelo lakho lokusebenza kusuka izinkinobho ngezansi futhi uqhubekele yakha uxhumane nathi ukuze uthole uhlelo lakho lokusebenza. nomake, Sicela usazise (US) yamahhala (866) 603-2195, noma endaweni (727) 449-0891 Call. Izingcingo eziya Europe +44 (0) 115 704 3306
Dinga usizo? (lwe-Windows)
Dinga usizo? (Mac OS X)
© 2019 LC Technology International, Inc. All Rights Reserved. Inqubomgomo yobumfihlo